कोरोना महामारीको त्रासबाट कहिले मुक्ति पाइएला?
विज्ञानको भक्तिगान अब गाइरहन मिल्दैन । कोभिड–१९ का कतिपय तत्त्वहरूलाई विज्ञानले कहिले पनि बुझ्न सक्दैन र उसले बुझुन्जेलसम्म कुरिरहने हो भने हामीले सामान्य जीवन बिताउनै पाउँदैनौं ।
कोभिड–१९ लाई मानिसले सुस्त पार्ने, रोक्ने वा बुझ्ने प्रयास गरे पनि विफल भइसकेको छ । विज्ञानले अन्ततोगत्वा महामारीको बारेमा अझै धेरै कुरा थाहा पाउला तर त्यो सुस्त प्रक्रिया हो ।
विज्ञानले सही काम गर्ने हो भने पूर्णतः गलत निष्कर्ष निकाल्ने छैन । द स्पेक्टेटर पत्रिकामा डा जोन लीले लोकप्रिय बनाएको सिद्धान्त पत्याउने हो भने कोभिड फैलिँदै जाँदा कम घातक बनेको छ र अहिले यो खासमा निष्क्रिय छ ।
किन छोटो अवधिमा धेरै मानिस मरे र अप्रिल महिनापछि मृत्युसंख्या घट्दै गएको छ भन्ने कुरालाई यसले सही व्याख्या गर्छ । कोभिडका विषयमा गरिएका धेरैथरी अध्ययनले यो तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको, यसको विभिन्न थरी स्ट्रेन भएको र पुनः संक्रमणको जोखिम पनि रहेको देखाएको छ । अनि भाइरस आफैंमा परिवर्तन आउँदा सबैतिर मृत्युको उस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ र लकडाउन, जनसंख्या, सम्पर्क पहिचान वा अन्य कुनै पनि उपायले यसमा फरक पारेको छैन ।
दिनहरू बित्दै जाँदा भाइरसले अलि कम घातक रूप लिँदै गएको सम्भावना बढी छ । तर यस तथ्यलाई विज्ञानका उपकरणले तत्कालै वा निकै पछि भए पनि स्थापित गर्न लगभग असम्भव छ । प्रत्येक व्यक्तिको शरीर र सूक्ष्म जीवाणुका प्रकृति भिन्न हुनाले विज्ञानले ठ्याक्कै यही हो भन्न सक्ने स्थिति छैन ।
कोभिडका विषयमा मानिसहरूले यस कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र सामान्य दिमाग लगाउँदै वैज्ञानिक विधिको भक्तिगान गाउन छोड्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अब हामी ९९.९ प्रतिशत सामान्य जीवनतर्फ फर्कन सक्छौं भनी समकक्षी समीक्षा सहितको अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो कहिले पनि गरिने छैन तर हामी सामान्यतर्फ फर्किनपर्ने हुन्छ ।
कोभिड–१९ ले निम्त्याएको जोखिमका तथ्य बढाइचढाइ गरिएकोले धेरै मानिस निकै तर्सिएका छन् र उनीहरूलाई यो हौवा हो भन्ने कुरा बुझाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउनुपर्ने चाहिँ छ ताकि उनीहरू आफ्नो पुरानो जीवनमा फर्किन सकून् । अहिले शासकहरूले यसको जिम्मेवारी लिने छैनन् किनकि यसो गर्दा दोष स्वीकार गरे बराबर हुन्छ ।
अहिले सबै समझदार मानिसले शान्त रहने तर साथीभाइ र अधिकारीहरू सबैसँग कोरोनाभाइरस नियन्त्रणहरू पूरै हटाउन पहल गरिरहने काम गर्नुपर्छ । यो खतरनाक ‘नयाँ सामान्य’ प्रति विमति जनाउँदै लन्डन र बर्लिनमा आयोजित सामूहिक भेला प्रशंसनीय छन् ।
डा. रवीन्द्र पाण्डेको अपिल : दशैंमा ज्येष्ठ नागरिक र...
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसिएपछि सेनाबारे बोले पोखरेल
टयाङ्करबाट पम्पमा इन्धन खन्याउने क्रममा आगलागी